दसैंमा बजार अनुगमनमा आफैं निस्किन्छु : मन्त्री खनाल
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले दसैंमा मासुको कुनै अभाव नहुने बताएका छन् । मन्त्री खनालले दसैंमा देशभरि कतैपनि मासुको अभाव नहुने स्पष्ट पारेका हुन् । उनले भने, ‘काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ५५ हजार खसी बोका आवश्यकत्ता हो, ४० हजार खसी बोका आउने भइसके । अब हामीलाई पर्याप्त हुन्छ । मासुको कुनै अभाव हुँदैन् ।’
अनुदानमा ढुवानी गरी बाजुराको स्याउ बजारमा
बाजुराको दुर्गम क्षेत्रमा उत्पादन गरिएको स्याउ अनुदानमा ढुवानी गरी अनुदान धनगढीमा ल्याएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र बाजुराले छ सय क्वीन्टल स्याउ ढुवानी गर्न प्रतिकिलो १८ रुपैयाँ अनुदान दिएर बाजुराको स्याउ बजारमा पठाएको छ । पहिलो लटमा ६० क्वीन्टल स्याउ बाजुराको जुकोटबाट धनगढी ल्याएको कार्तिकस्वामी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले धनगढीमा २२ किलोको प्रति कार्टुन दुई हजारमा बिक्री गरेको छ । सहकारीका अध्यक्ष मेघराज शाहीले ढुवानी अनुदानमा बाजुराको स्याउ काठमाडौंसमेत लगिरहेको बताए । उनले पहिलो लटमा एक सय २५ स्याउ काठमाडौं पठाइरहेको बताए ।
दसैंका लागि किनमेल गर्न भारतीय बजारमा भीड
नेपालमा मनाइने दसैं, तिहार, छठ, तीजलगायतका चाडपर्वका कारणले नेपालको आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुने भए पनि त्यस्को सबैभन्दा बढता फाइदा भारतीय अर्थतन्त्रलाई हुने गरेको छ । हरेक वर्ष व्यापार घाटा बढ्दै गएपनि चाडपर्वका समयमा अझ बढी व्यापार भारतमा फस्टाउँदा नेपाली अर्थतन्त्र प्रभावित बन्ने गरेका हुन् । नेपालसँग सीमा जोडिएका भारतीय बजारहरू जोगबनी, रक्सौल, सुनौली, बढनी, रूपौडीया, बनबासा लगायतका दर्जनौ सीमावर्ती भारतीय बजारमा अहिले दैनिक १ लाख भन्दा बढी नेपालीहरू किनमेलका लागि पुग्ने गरेका छन् ।
केरुङ हुँदै चिनियाँ भूमिबाट खाद्यान्न ढुवानी
नेपाल खाद्य संस्थानले हुम्लामा चाडपर्वका बेला खाद्यान्न अभाव हुन नदिन चिनियाँ भूमी प्रयोग गर्दै ढुवानी गरेको छ । संस्थानको हुम्ला शाखाले दसैं र तिहारलाई लक्षित गरी हवाई र स्थलमार्गबाट खाद्यान्न ढुवानी सुरु गरेको हो । रसुवाको केरुङ नाकाबाट चीनको विभिन्न भाग हुँदै पुनः हुम्लाको सीमामा रहेको हिल्सा नाकाबाट खाद्यान्नको ढुवानी सुरु भएको छ । हाल सिमकोटमा रहेको नेपाल खाद्य संस्थानको डिपोमा ढुवानीको लागि नाम्खा गाउँपालिकाको केर्मीबाट हरेक दिन ३ वटा टिपरले ढुवानी गर्दै आइरहेका छन् ।
बजार मूल्यभन्दा सस्तोमा बिक्री सुरु
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले बजार मूल्यभन्दा सस्तोमा खसीबोका र च्याङ्ग्राको बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले सोमबारदेखि थापाथलीस्थित गोदामबाट सहुलियत दरमा खसीबोकामा र च्याङ्ग्राको बिक्री खुला गरेको हो ।
पशुपतिनाथ मन्दिरमा भक्तजनले चढाएको भेटी नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले दैनिक गणना गरी बैंकमा दाखिला गर्ने भएको छ । पशुपतिमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा कोषका सदस्यसचिव डा प्रदीप ढकाल र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिबहादुर पाण्डेले दैनिक भेटी गणना गरी बैंकमा दाखिला गर्ने कार्यको शुरुवात गरेका हुन् ।
लैंङ्गिक उत्तरदायी बजेट कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता
झापाका स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले चालू वर्षमा जिल्लाका पालिकाहरुबाट लक्षित वर्गका लागि छुट्याइएको बजेटको सफल कार्यान्वयन गर्दै समृद्धि प्राप्तिमा अग्रसर हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सहितको सामाजिक न्यायका लक्षित वर्गका लागि छुट्याइएको बजेटको सफल कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
नेपाली समाजमा दसैंको धार्मिकभन्दा पनि साँस्कृतिक महत्व बढी छ । आम नेपालीले यसलाई विगतमा जस्तो असत्यमाथि सत्यको जित अथवा आसुरी शक्तिमाथि दैवीशक्तिको विजयभन्दा पनि पारिवारिक पुनर्मिलनको पर्वका रूपमा मनाउँछन् । समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणले यसलाई पारिवारिक पुनर्मिलनको पर्व भनिन्छ भने वैश्य युगमा दसैंको परिभाषा यतिमा सीमित रहन सक्दैन । दसैंको महत्व अब समाजशास्त्रीय परिभाषामा साँघुरिएर रहन सकेन किनकी यो मूलतः सामाजिकसँगै आर्थिक पर्वमा रूपान्तरित भएका छ । हरेक नेपालीले मनाउने यो पर्वमा खर्च यतिधेरै हुन्छ कि देसकै अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ।
खानपान संस्कृतिको परिपक्क निरन्तरता
जब–जब चाडबाड आउँछ धेरैले सम्झने विषय हो, बालबालिका छँदाको रहर । नयाँ लुगा र मिठामिठा खाने कुरा । हिमाल, पहाड, तराई होस् वा होउन् विभिन्न जात, धर्म, वर्ग र सम्प्रदाय चाडबाडले सानो छँदा मात्र होइन ठूलो छँदा पनि छुन्छ । भौगोलिक बनोट अनुसार उपलब्ध खानेकुराका परिकारहरू खानु नेपाली चाडवाडका छुट्टै विशेषता बन्दै आएका छन् । र, चाडवाडमा पाइने खुसीलाई कृषिबाटै प्राप्त हुँदै आएका छन् । कृषि संस्कृतिको मियोमा चाडबाडका मेलोमेसोले मुर्तरूप पाउँदै आएका छन् ।
तराई–मधेशमा दसैं खर्च अढाइ खर्ब बढी
नेपालको सबैभन्दा ठूलो चाड दसैं तराई मधेशका घर घरमा घटस्थापना गरी मनाउने गरिन्छ । शक्तिका विभिन्न स्वरूपकी देवीको पूजा अर्चना गरि मनाउने परम्परा तराई मधेशमा पुरानै रहेको छ । लामो समय घर बाहिर बस्ने परिवारका सदस्यहरू दसैंमा घर फर्केपछि छठसम्म बसेर विदा र जम्मा गरेको रकम खर्च गर्ने गर्छन् ।
चाडपर्वलक्षित व्यापारको मौसम
दसैं लागेपछि स्वभाविक रुपमा बजारमा चहलपहल बढ्ने गर्दछ । यसै अवसरको सदुपयोग गरेर विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुले चाडपर्वलक्षित योजना पनि ल्याउने चलन छ । गर्मि मौसम सकिँदा नसकिँदै तथा जाडो मौसमको सुरुवातामा नै दसैं पर्ने हुनाले यतिबेला विद्युतीय उपकरणको बजार तातेको पाइन्छ । यसै सन्दर्भमा बजार हाल केहि औद्योगिक तथा व्यापारिक घरानाले दसैं लक्षित गरेर ल्याएको योजना तथा बिक्रीका बारेमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक छ । गोयन्का ग्रुपले विगत लामो समयदेखि घरायसी प्रयोजनको लागि होम अप्लायन्सहरु उत्पादन गर्दै आइरहेको छ ।
नयाँ आयाम, सन्दर्भ, अर्थ र रूप भएको चाड हो दसैं । समाजशास्त्रीय हिसाबले दसैं भन्ने बित्तिकै पारिवारिक मिलन पनि भन्ने हो, तर दसैं हरेक तह र तप्काबाट आर्थिक रुपमा जोडिएको छ । जसले सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सबै क्षेत्रमा उत्साह तथा हर्सोल्लास ल्याउँछ र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ । दसैंं तिहारमा विदेशिएका नेपालीहरू फर्कने, रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्ने, अटोमोबाइलको बिक्री बढ्ने, यात्रुको चाप, लत्ताकपडाको व्यापार, मासु तथा मदिराको बिक्रीलगायत सम्पूर्ण कारोबार ह्वात्तै बढ्ने भएकोले पनि दसैंं, तिहार तथा छठमा करिब १० खर्ब रुपैयाँ बराबरको अर्थतन्त्र चलायमान हुने अनुमान गरिएको छ ।
जिउँदै खसीबोका तौलिएर बिक्री
शीतगंगा नगरपालिकाको सहयोगमा निर्मित संकलन केन्द्रमा जम्मा भएका दुईसय भन्दा बढी खसी बोका देखेपछि होटल सञ्चालक आश्चर्य मान्दै भन्छन्, शीतगंगामा यति धेरै बाख्रा रैछन् ? कसरी बिक्री गर्ने हो ? सहकारीकी व्यवस्थापक भन्छिन् यो त शुरुवात मात्र हो, अब सबै बाख्रा तौलेर मात्र बिक्री हुन्छन् । मूल्य प्रतिकेजी ३८० देखि ४५० सम्म पर्छ ।
बाँके र बर्दियाबाट पाँच हजार खसी पठाइँदै
बाँके र बर्दियाका उद्यमी महिलाहरुले दशैंका लागि पाँच हजार खसी–बोका राजधानी काठमाडौं लगायत बजारमा पठाउने तयारी गरेका छन् । सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी जिल्ला संघले संघमा आवद्ध भइ व्यावसायिक बाख्रापालन गरेका महिलाहरुले उत्पादन गरेका खसीबोका व्यावसायिक रुपमा काठमाडौं पठाउन थालेका हुन् ।
नेपालमा चाडपर्व, भारतमा व्यापार
चाडपर्व सुरु पनि झापाका अधिकांश बजार सुनसान छन् । झापाको बिर्तामोड, दमक, शनिश्चरे, केही वर्ष अघिसम्म हङकङ बजारको रुपमा चिनिने धुलाबारी, काँकडभिट्टा लगायतबजारमा चाडपर्वको चहलपहल छैन । तर, काँकडभिट्टासँग सीमा जोडिएको भारतीय बजार पानीट्यांकी, सिलगुडी, नक्सल नेपाली ग्राहकले भरिभराउ हुन थालेका छन् । सस्तोमा सामन पाउने आशमा नेपाली भारतीय बजारमा किनमेलका लागि पुग्छन् ।